City Mart မှာဈေးဝယ်ရင် သတိပြုစရာ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / City Mart မှာဈေးဝယ်ရင် သတိပြုစရာ
City Mart မှာဈေးဝယ်ရင် သတိပြုစရာ
Apann Pyay 1:04 PM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
ကျွန်မ ဒီနေ့ ၂၀.၇.၂၀၁၇ မှာ မြေနီကုန်း city mart မှာဈေးဝယိပါတယ် …အားလုံး item 22ခု ကျသင့်ငွေ 43652 ကျပ် ကျသင့်ပါတယ် ။
အဲ့ဒါကို slip ထုတ်တဲ့အချိန် 72500 ကျပ် ကျသင့်ပြီး slip ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ပိုက်ဆံ ရှင်းပြီး ချိန် အိမိက လူက စိတိထဲ သိပ်မသင်္ကကာ တာမို့ slip voucher ကို ပြန်စစ် ခိုငိးတဲ့အခါ Item 12ခု မြောက်မှာ Golden prawn special ဆိုပြီး 28031 ဆိုပြီးထည့်ပေါင်း slip ထုတ်ထားပါတယ် ..။
အဲ့ဒါ ကို car parking ကနေ ပြန် တက်ပြီး ပြန်ပြောတဲ့အချိန် system error ဆိုပြီး မတောင်းပန်ပဲ ကျွန်တော် တို့ ဘာမှ လုပ်ပေးလို့မရဘူး ချည့်ပြောလာပါတယ် .. ။ အဲ့အတွက် ကျွန်မ က အကယ်၍ ရှင် တို့ ဆီကနေ ပစ္စည်း တခု မှားပါသွားရင် system error,ဒါမှမဟုတ် မှားပါသွားတယ် မသတ်မှတ်ပဲ ခိုး ယူပါတယ် ။
ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်နဲ့ ဘယ်လောက်လျှော်ခိုင်းပါသလဲ လို့မေးတဲ့အချိန် အဲ့ဒီ့ manager ဆိုသူပြန်ဖြေတာ က ၁၀ ဆ ပါတဲ့ ဟုတ်ပြီ ဒါဆို ခု ရှင်တို့ရဲ့ system error အတွက် ဘယ်လို တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးမလဲဆိုတော့ အဲ့ဒါဟာ system error ပါတဲ့ ပို ဖြတ်ထားတဲ့ slip ဟာ system ထဲ ရောက်သွားတာမို့ပါတဲ့ …။
အဲ့လိုပြောနေရင်း ဟုတ်ပြီ ရှင်တို့ကို ကျွန်မ by name နဲ့ city mart ရဲ့ reputation နဲ့ တကွ တင်ပါမယ်ဆိုတဲ့အခါ က အမ စိတ်ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးပါ့မယ် တဲ့ …ကျွန်မ ပေးလိုက်ရတဲ့ ငွေရဲ့ ၂ ဆ. လျှော်ခိုင်းတဲ့အခါ လဲ အဲ့ မှားတဲ့ ဝန်ထမ်း ကို ဘာ action မှ ယူစရာ မလိုပဲ စောန ဖြစ်နေတဲ့ system error အရ အံဆွဲ ထဲ က28031 ရဲ့ နှစ်ဆ ကို လွယ်လွယ်ပဲ ထုတ်လျှော်လိုက်ပါတယ် …။
ပြီးတဲ့အခါ အဲ့ system error ဟာ ဘယ် item မှာ ဖြစ်သလဲ ဆိုတော့ pork rib ဆိုတဲ့ 3831 ကျပ်တန် item အစား ရွှေပုဇွန်ခြောက် 28031 တန်ပါ …ကဲ ဘယ်အထက်လူကြီး မှ တင်စရာ မလိုပဲ branch manager နဲ့တင် ပြီးတဲ့ system error ပါနော် …ဘယ်ကနေ ဘယ်လို slip မစစ် တဲ့သူတွေကို ဂျင်းနေလဲ စဉ်းစား မြင်ယောင် ကြည့်ကြပါတော့ …
System error အရ လွယ်လွယ် ရှင်းပေးလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံ 50000( တသောင်းတန် ငါးရွက်) ကိုလဲ အကယ်၍ တာဝန်ရှိသူတွေအနေ နဲ့ အဲ့ဒီ့ system error ဆိုပြီး system အရမရှင်းပဲ လွယ်လွယ် အံဆွဲ ထဲ နှိုက်ပေးနိုင်တဲ့ manager နဲ့ male cashier ကို action ယူမယ်ဆို တန်ရာ တန်ကြေး ပဲယူပြီး ပြန်ပေး ဖို့ ဝန် မလေးပါဘူး…။
ပုံပါ staff နှစ်ယောက်ကိုတော့ city mart ရဲ့ reputation အရ ဘယ်လို တာဝန်ယူ မလဲ ပဲ သိချင် ပါတယ် ။
Credit to Su Su Paing
ကြှနျမ ဒီနေ့ ၂၀.၇.၂၀၁၇ မှာ မွနေီကုနျး city mart မှာဈေးဝယိပါတယျ …အားလုံး item 22ခု ကသြငျ့ငှေ 43652 ကပျြ ကသြငျ့ပါတယျ ။
အဲ့ဒါကို slip ထုတျတဲ့အခြိနျ 72500 ကပျြ ကသြငျ့ပွီး slip ထုတျပေးလိုကျပါတယျ ။ ပိုကျဆံ ရှငျးပွီး ခြိနျ အိမိက လူက စိတိထဲ သိပျမသင်ျကကာ တာမို့ slip voucher ကို ပွနျစဈ ခိုငိးတဲ့အခါ Item 12ခု မွောကျမှာ Golden prawn special ဆိုပွီး 28031 ဆိုပွီးထညျ့ပေါငျး slip ထုတျထားပါတယျ ..။
အဲ့ဒါ ကို car parking ကနေ ပွနျ တကျပွီး ပွနျပွောတဲ့အခြိနျ system error ဆိုပွီး မတောငျးပနျပဲ ကြှနျတျော တို့ ဘာမှ လုပျပေးလို့မရဘူး ခညျြ့ပွောလာပါတယျ .. ။ အဲ့အတှကျ ကြှနျမ က အကယျ၍ ရှငျ တို့ ဆီကနေ ပစ်စညျး တခု မှားပါသှားရငျ system error,ဒါမှမဟုတျ မှားပါသှားတယျ မသတျမှတျပဲ ခိုး ယူပါတယျ ။
ဆိုတဲ့ သုံးသပျခကျြနဲ့ ဘယျလောကျလြှျောခိုငျးပါသလဲ လို့မေးတဲ့အခြိနျ အဲ့ဒီ့ manager ဆိုသူပွနျဖွတော က ၁၀ ဆ ပါတဲ့ ဟုတျပွီ ဒါဆို ခု ရှငျတို့ရဲ့ system error အတှကျ ဘယျလို တာဝနျယူ ဖွရှေငျးပေးမလဲဆိုတော့ အဲ့ဒါဟာ system error ပါတဲ့ ပို ဖွတျထားတဲ့ slip ဟာ system ထဲ ရောကျသှားတာမို့ပါတဲ့ …။
အဲ့လိုပွောနရေငျး ဟုတျပွီ ရှငျတို့ကို ကြှနျမ by name နဲ့ city mart ရဲ့ reputation နဲ့ တကှ တငျပါမယျဆိုတဲ့အခါ က အမ စိတျကနြေပျအောငျလုပျပေးပါ့မယျ တဲ့ …ကြှနျမ ပေးလိုကျရတဲ့ ငှရေဲ့ ၂ ဆ. လြှျောခိုငျးတဲ့အခါ လဲ အဲ့ မှားတဲ့ ဝနျထမျး ကို ဘာ action မှ ယူစရာ မလိုပဲ စောန ဖွဈနတေဲ့ system error အရ အံဆှဲ ထဲ က28031 ရဲ့ နှဈဆ ကို လှယျလှယျပဲ ထုတျလြှျောလိုကျပါတယျ …။
ပွီးတဲ့အခါ အဲ့ system error ဟာ ဘယျ item မှာ ဖွဈသလဲ ဆိုတော့ pork rib ဆိုတဲ့ 3831 ကပျြတနျ item အစား ရှပေုဇှနျခွောကျ 28031 တနျပါ …ကဲ ဘယျအထကျလူကွီး မှ တငျစရာ မလိုပဲ branch manager နဲ့တငျ ပွီးတဲ့ system error ပါနျော …ဘယျကနေ ဘယျလို slip မစဈ တဲ့သူတှကေို ဂငျြးနလေဲ စဉျးစား မွငျယောငျ ကွညျ့ကွပါတော့ …
System error အရ လှယျလှယျ ရှငျးပေးလိုကျတဲ့ ပိုကျဆံ 50000( တသောငျးတနျ ငါးရှကျ) ကိုလဲ အကယျ၍ တာဝနျရှိသူတှအေနေ နဲ့ အဲ့ဒီ့ system error ဆိုပွီး system အရမရှငျးပဲ လှယျလှယျ အံဆှဲ ထဲ နှိုကျပေးနိုငျတဲ့ manager နဲ့ male cashier ကို action ယူမယျဆို တနျရာ တနျကွေး ပဲယူပွီး ပွနျပေး ဖို့ ဝနျ မလေးပါဘူး…။
ပုံပါ staff နှဈယောကျကိုတော့ city mart ရဲ့ reputation အရ ဘယျလို တာဝနျယူ မလဲ ပဲ သိခငျြ ပါတယျ ။